CorelDRAW म्याक मा एक महान अनुभव दिदै भूमि क्रिएटिव अनलाइन
र अन्तमा CorelDRAW म्याकमा आउँछ; विन्डोजको लागि अब विशेष छैन
को अन्ततः भन्न लागिरहेको थियो हामी म्याकमा CorelDRAW हेर्न जाँदै थियौं। तर यो त्यस्तै हो, त्यो प्रोग्राम जुन सँधै विन्डोज एक्स्क्लुभ भएको छ, कोरेलले यसको डिजाइन प्याकेजको नयाँ र सुधारिएको संस्करणमा सुरू गरे: CorelDRAW Graphics Suite 2019।
त्यसो भए, विन्डोजमा यसको संस्करणको लागि नयाँ सुविधाहरू ल्याउने बाहेक, कोरेलड्रावा पहिले नै म्याकोसमा अवस्थित छ। सबै म्याक प्रयोगकर्ताहरूका लागि पहिलो कि तिनीहरूको हातमा तिनीहरूको रचनात्मकता र ग्राफिक डिजाइनको लागि उपकरणको रूपमा एक उत्तम समाधान छ।
र यो भनिनुपर्दछ कि २००१ मा कोरेल म्याकोसमा उपस्थित थिए, त्यसैले अब यो अझ उत्साहका साथ फर्किन्छ विशेष पुनर्निर्मित संस्करणको साथ र Corel द्वारा retouched म्याक मा एक महान नेटिभ अनुभव प्रदान गर्न।
अर्को शब्दमा, त्यहाँ संस्करणको कुरा हो जुन सँगसँगै छ विन्डोज को लागी पछिल्लो संस्करण जारी भयो। यस उपकरणको परीक्षणको लागि पूरै क्षण र तपाइँ यसको वेब संस्करणमा पनि फेला पार्न सक्नुहुनेछ CorelDRAW.app, सुविधाहरूमा कम भए पनि, यद्यपि यो कुनै पनि वेब ब्राउजरबाट उपलब्ध छ।
वेबको लागि यो कम गरिएको संस्करणको विचार यो हो कि होभेक्टर अनुप्रयोगको वैकल्पिक संस्करण र जसले गर्दा कुनै पनि सिर्जनाकर्ताले आफ्ना परियोजनाहरू कुनै पनि अनुप्रयोग वा पीसी र म्याकको लागि यसको ठूलो संस्करणमा समान कार्यक्रमको आवश्यकता बिना नै साझेदारी गर्न सक्दछन्।
यो सबै को बारे मा सबै भन्दा राम्रो कुरा हो Corel लडाई जारी छ फोटोशपको गम्भीर विकल्प रहन जुन ग्राफिक डिजाइनको संसारमा सबै कुरा जस्तो देखिन्छ; यस भन्दा पहिले त्यहाँ अन्य महान प्रस्तावहरू छन् यसको डिजाइनर र अधिकको साथ सम्बन्ध.
केही नयाँ CorelDRAW संस्करण .app सुविधाहरू यो वेब प्रयोगको लागि ब्लरिलो फोटोहरू तिखार्ने क्षमता हो र हामीले भनेको छ कि ग्राहकहरू र सहकर्मीहरूसँग परियोजनाहरू साझेदारी गर्ने क्षमता।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » र अन्तमा CorelDRAW म्याकमा आउँछ; विन्डोजको लागि अब विशेष छैन
पाको डी हार्लेसन भन्यो
म के को लागी खानु?
Paco D Harleyson लाई जवाफ दिनुहोस्
चिपी बारोन भन्यो
ठूलो घोषणा! मलाई यो महत्वपूर्ण घोषणाहरूको लागि मेरो विशेष ठाउँमा राख्नुहोस्।
चिप्पी बारोनलाई जवाफ दिनुहोस्
Guty amezcua भन्यो
फ्रान्सिस्को एन्ड्राड मेन्डेज
Guty Amezcua लाई जवाफ दिनुहोस्
फ्रान्सिस्को एन्ड्राड मेन्डेज भन्यो
तर Corel बेकार छ
फ्रान्सिस्को एन्ड्राड मन्डेजलाई जवाफ दिनुहोस्
यसैले मैले तपाईंलाई हगाहा ट्याग गरें
टाइटस निलो भन्यो
अब सबै Corel प्रेमीहरु (मलाई एक थाहा छैन तर म जान्दछु तिनीहरू बाहिर छन्) ले थाहा पाउँदछ कि यसले म्याकको साथ काम गर्न कस्तो महसुस गर्दछ।
Tito Azul लाई जवाफ दिनुहोस्
तट मार्ग भन्यो
कोरेल अग्रगामी थिए, जसरी फ्रिह्यान्ड थियो, र १ 15 भन्दा बढी बर्षमा कसै कसैले पनि तिनीहरूलाई प्रयोग गरेका छैनन्। Corel धेरै प्रिन्ट्री हो र केहि मा यो अझै प्रयोग गरीन्छ तर धेरै धेरै, यो यस्तो देखिन्छ यदि तपाईं Quarrckxpress प्रयोग गर्नुहुन्छ। ग्राफिक कलाकारहरू र डिजाइनरहरूले इलस्ट्रेटरसँग वर्षौंसम्म काम गरे।
कोस्टा क्यामिनोलाई जवाफ दिनुहोस्
येशू मोलिना रोजा भन्यो
CorelDraw पहिले नै म्याक को लागी एक संस्करण थियो, ११, यदि मेमोरीले मलाई सही सेवा गर्छ र यो CHUSTA थियो।
जेसस मोलिना रोजालाई जवाफ दिनुहोस्
एलन Samplikas भन्यो
२० बर्ष पहिले म्याकको लागि कोर थियो, उत्सुकताका साथ यो विन्डोजको लागि भन्दा खराब थियो।
Alan Samplikas लाई जवाफ दिनुहोस्
अलेक्ज्याण्डर गलिसिया भन्यो
फेबियन एस्नेडर हरनांडीज रे हाहााहा
अलेक्ज्याण्डर गलिसियालाई जवाफ दिनुहोस्
माकी माउस भन्यो
धेरै बेर भयो जबदेखि मैले पीसी / कोरेलबाट म्याक / इलस्टार्टरमा सर्नुपर्‍यो ... अब म आफूलाई के सोध्छु, किन?
माकी माउसलाई जवाफ दिनुहोस्
साम्राज्य, एक अष्ट्रेलियाली हवेली जहाँ प्रेरणा पाउन
ब्रूनो पोन्टीरोलीले योग गरीरहेका जनावरहरूको चित्रहरू